Sucuudiga Iyo Xulafadiisa oo Qadar Usoo Gudbiyey Qodobo La yaab Badan - Hablaha Media Network
Sucuudiga Iyo Xulafadiisa oo Qadar Usoo Gudbiyey Qodobo La yaab Badan
HMN:- Dawladda Qadar waxaa loo soo gudbiyey 13 qodob oo ah eedaymaha ay u soo jeediyeen afarta dal ee hoggaaminaya weerarka ka dhanka ah dawladda Qatar kuwaas oo kala ah Sucuudiga, Imaaraadka , Bahrain iyo Masar.
13 qodob ayaa marka aad akhridid waxa kuu soo baxaysa xaaladda ay ku sugan yihiin dalalkaasi, waxayna Qatar u qabteen muddo 10 maalmood ah in ay ku fuliso qodobadan.
1.In Qatar Xidhiidhka ay Iiraan la leedahay aad hoos ugu dhigto, kuna eekaado arrimaha aan laga maarmi karin, gaar ahaan dhinaca ganacsiga, cuna qabataynta Maraykanka saaray Iiraana Qatar ku ekaato, Aragtida wadamada gacanka ee ku wajahan Iiraana Qatar toos u qaadato.
2.In Qatar xidho saldhiga milatari ee Turkigu ka furanayo Qatar, degdegna u joojiso xidhiidhka milatari ee ay Turkiga la samaysatay.
3. In Qatar xidhiidhka u jarto dhamman ururada kala ah (Daacish, Nusra, Ikhwaanu Muslimiin, Xisbulaha, Alqaacida) kuna daraan liiska argagaxisada sida ay ugu dareen dalalka afarta ahi, xubnaha lagu tuhunsan yahayna degdeg u soo dhiibaan.
4. In Qatar joojisa taageerada dhaqaale ee ay siiso ururadaas.
5. In Qatar Soo dhiibto qofkasta oo ay codsadaan afartan dal sida ugu dhakhsaha badan.
6. TV Aljazeera oo iridaha loo xidho iyo dhammaan qaybaha Warbaahinta ee Qatar taageerto.
7. In Qatar faragalinta ay ku hayso dalalkan afarta ah joojiso, dadka ay dhalashadooda siisan joojiyaan, kuway hore u siiyeena kala noqdaan soona tarxiilaan.
8. Magdhaw in Qatar bixiso dhammaan dadkii ku waxyeeloobay faragalintay dadkan afarta ah ku waxyeeloobay.
9. In Qatar noqoto dal la siyaasad noqda dalalka afarta ah, dhinac walba.
10. In Qatar soo gudbiso dhammaan kooxaha ay taageertay, dhaqaalahay siisay , magacayadooda iyo wax kasta oo ku saabsan.
11. Qatar in ay xidho dhamman warbaahinta ay dhaqaalaha ku bixiso kuwaas oo ay xuseen.
12. Dhammaan qodobadaas waa in ay Qatar ku ogolaataa oo kaga soo jawaabtaa muddo 10 maalmood ah, haday kaga soo jawaabi weydana waa ay laalmayaan qodobadani.
13. Haddii ay Qatar sidan ogolaato fulinta qodobadan waa ladaba galayaa Bil .Sadex bilood, sanad si ay u fulaan Waa qodobadii oo kooban faafinta waxaad ka sii akhrin kartaa warqaddan Carabiga ku qoran.
Sida muuqata Qatar qodobadan waxay ka dhigayaan haday yeesho kuwo qarannimadeeda meesha ka saaraya , waxaana ku jira qodobo aan markii hore laba hadal hayn sida Saldhiga Turkiga oo ay muuqato in hadda lagu soo daray, waxaana laga reebay Ururka Xamaas oo markii hore Qatar lagu eedeeyey in ay taageerto.
Waxaana muuqata in ay dareemeen in Xamaas oo lagu daraa liiskan aysan ka soconayn, sida muuqatana dawladaha waa weyn ee Carbeed haday yihiin wax ay Qatar cuna qabatayna u saareen qodobadan in ay muujiyeen mustawha ay taagan yihiin dhinac walba , waana arrintan tay dawladaha cadaadiska ugu saarayeen in ay taageeraan.
Run ahaantii Soomaaliya mawqifkay qaatay waa mawqif sharafeed, kuwii daba galay dalalkana waji gabax ayey ku sugan yihiin, ilaahay ha gargaaro Qadar iyo shacabkeedaba.